13ka Shabakadood ee Waxbaridda Ingiriisiga ee ugu sarreeya 2022
Haddii aad rabto inaad ku fiicnaato Ingiriisiga, waxaad dhex mari kartaa liistada shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah ee looga dooday qoraalkan baloogga, iska qor mid oo bilow barashada adigoon wax dhib ah lahayn.
Hirgelinta tiknoolajiyadda ee goobta waxbarashada waxay keentay faa'iidooyin badan, waxaa jira wax PDF ah oo aad ka heli karto buugaagta waxbarashada iyo agabka kulliyadda sida faylasha PDF oo aad ku haysato taleefankaaga ama laptop -kaaga halkii aad ka qaadan lahayd agab culus. Mashruucyada, laptops -yada, taleefannada casriga ah, iyo intarneedka ayaa ah qaar ka mid ah aaladaha dhijitaalka ah ee ka qaybqaatay dib -u -habeynta habka aan wax u barinno oo wax u baranno.
Shakhsi ahaan, waxaan u malaynayaa in sida ugu fiican ay tahay inay ahaato masaafo iyo barashada onlaynka ah, taas oo aaladaha dhijitaalka ah loo adeegsado inay u qabtaan fasallo aad wax ku ool u ah ardayda aan ku noolayn agagaarka machadka ama sida kiiska masiibadii ugu dambaysay halkaas oo ardaydu aanay lahayn ikhtiyaar laakiin si aad guriga uga barato, waxbarashada onlaynku waxay badbaadisay maalintii iyada oo la adeegsanayo aaladahaan dhijitaalka ah.
In kasta oo barashada khadka tooska ahi aysan ahayn wax cusub, haddana waa uun in iskuulo badan ay u hoggaansanaayeen sidii hore loo qaadan lahaa laakiin markaa masiibada ayaa ku dhacday waxayna ku qasbanaadeen inay qaataan. Xaqiiqdii, waxaa jira jaamacad si buuxda loo aqoonsan yahay oo loo yaqaan Jaamacadda Dadka oo bixisa dhammaan barnaamijyadeeda waxbarasho 100% khadka tooska ah waxaadna heli kartaa bachelor, master, ama shahaadada dhakhtarnimada markaad qalin jabiso.
Tani waa kaliya si loo muujiyo inta ay le'eg tahay waxbarashada internetka. Sidoo kale, waxaa jira aagag waxbarasho oo onlayn ah oo hay'ado badan oo sarsare ay iska kaashadeen si ay u gaarsiiyaan ardayda meel kasta oo adduunka ah waxbarasho aan kala go 'lahayn. Mararka qaarkood, waxay bixiyaan barnaamijyo u horseeda darajooyin kala duwan oo kala duwan oo la aqoonsan yahay oo ay aqoonsadeen HR -yada adduunka oo idil.
Ka sokow bixinta koorsooyinka kuleejka iyo jaamacadda, goobahan barashada tooska ah waxay sidoo kale bixiyaan barnaamijyo is-horumarin ah. Tusaale ahaan, haddii aad taqaan waxoogaa barnaamij ama xitaa wax badan oo aad rabto inaad hagaajiso, aaladaha sida Khan Academy, Coursera, Udemy, iyo Alison waxay bixiyaan barnaamijyo horumarsan, dhexdhexaad ah, iyo bilowga ah ee barnaamijyada.
Goobahan ayaa sidoo kale aad ugu fiican “biyaha tijaabinta” ka hor intaadan baran koorsada ugu weyn ee jaamacadda. Sidoo kale, keligood uma adeegaan ardayda jaamacadda ama kuleejyada, aaladaha sida Khan Academy waxay siiyaan koorsooyin toos ah oo bilaash ah ardayda dugsiga sare (K-12), waxaa kale oo jira goobo kale oo badan oo loogu talagalay u adeegidda carruurta dugsiga sare.
Barashada khadka tooska ah waxay la timaaddaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin dabacsanaan, qiime jaban, is-socodsiin, si dhakhso leh loo dhammaystiray, waxaana jira kuwo badan oo bilaash ah (MOOCs).
Waxaan u diyaarinay maqaalkan shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah si looga caawiyo ardayda doonaya inay ku fiicnaadaan xirfadahooda ku hadalka iyo qorista Ingiriisiga, ama doonaya inay qaataan imtixaanka aqoonta luuqadda Ingiriiska ee daraasaadka caalamiga ah ee dibedda, iyo sidoo kale dadka doonaya inay qaataan shaqo barashada Ingiriisiga oo online ah si loo helo dakhli badan.
Ku barashada Ingiriisiga khadka tooska ah waa hab fiican oo lacag looga helo guriga oo haddii aad u qalanto markaa shaqo heliddu ma noqonayso dhibaato.
1 Waa maxay Websaytka Waxbaridda Ingiriisiga ee Onlineka ah?
2 Shuruudaha lagu Barto Ingiriisiga Onlineka
3 13 Shabakadaha Waxbaridda Ingiriisiga ee Ugu Fiican Online
3.3 3. 51 Hadal
3.4 4. Dhagaha Sixirka
3.8 8. Iftiinka barashada
3.9 9. EF Ingiriisiga Koowaad
Waa maxay Websaytka Waxbaridda Ingiriisiga ee Onlineka ah?
Shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah waa shabakado loogu talagalay inay baraan luqadda Ingiriisiga bartayaasha xiriirka fiidiyowga, farsamo ahaan, onlayn ah. Waxbaridda waxaa loo samayn karaa si qof-qof ah ama iyadoo la baro dhowr arday hal mar. Haddii aad Ingiriis ku barayso internetka ama aad ku baranayso Ingiriisiga khadka tooska ah, waa laga samayn karaa meel kasta illaa aad haysato Wi-Fi deggan ama xiriirinta xogta iyo laptop ama PC.
Shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah waxay u furan yihiin ardayda adduunka oo dhan, ma jiraan dalal xaddidan ka mid noqoshada iyo sidoo kale shuruudihii looga baahnaa ardayda inay ku biiraan. Laakiin macallin ahaan, waxaa laga yaabaa inay jiraan shuruudo ay tahay in la buuxiyo ka hor intaadan awoodin inaad barayaasha Ingiriisiga ku barato mareegahahan.
Shuruudaha lagu Barto Ingiriisiga Onlineka
Noqo af -Ingiriisi hooyo ama af yaqaan (ku kala duwan mareegaha)
Kombiyuutarka desktop-ka ama laptop-ka la jaan qaada Mac ama Windows OS oo leh kaameerad tayo sare leh
Haysashada shuruudahan iyo u shaqaalaysiinta inaad ku barato Ingiriisiga khadka tooska ah waxay noqon doontaa xabbad cake ah oo runtii waad ku raaxaysan kartaa raaxaysiga inaad ka shaqayso guriga oo aad kasbato lacag macquul ah inta aad sidaas samaynayso.
13 Shabakadaha Waxbaridda Ingiriisiga ee Ugu Fiican Online
Waxaa si toos ah hoos loogu taxay websaytyada waxbaridda Ingiriisiga ee ugu wanaagsan ee internetka oo faahfaahintooda la sii siiyay xagga hoose oo leh xiriirinta arjiga ee ardayda ama macallimiinta si ay ugu saxiixaan midka ku habboon baahidooda.
VIPKID waa mid ka mid ah shabakadaha barashada Ingiriisiga ee ugu wanaagsan online -ka ah oo leh aragti ah in la abuuro fasal caalami ah oo dhammaan carruurtu dareemaan inay ku xiran yihiin waxbarashadooda. Ma jiro ballanqaad saacadeed oo ugu yar fasal kastana waa 25 daqiiqo waxaadna wax bari kartaa inta ugu badan ama saacado yar oo aad rabto, inta badan ee aad wax barato, ayaa badan oo aad kasbataa. Websaydhku wuxuu gacanta ku hayaa bixinta qorshaha casharka si aad xoogga u saarto waxbaridda.
Macallimiinta ku jira VIPKID waxay sameeyaan inta u dhaxaysa $ 14-22 saacaddii waana inay ballan-qaadaan heshiis 6 bilood ah oo la saxiixay laakiin aan lahayn shuruudo saacad ugu yar oo aad had iyo jeer qaadan karto nasasho. Si aad u noqoto macallin, waxaa lagaa rabaa inaad haysato ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo wax-baris ah, ku kasbato afar sano oo shahaadada koowaad ee jaamacadda ah meel kasta ama mid weyn, oo aad sharci ahaan xaq u leedahay inaad ka shaqayso Mareykanka ama Kanada.
Liisaska shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah, Cambly aad ayuu caan u yahay tanna waa sababta oo ah shuruudaha lagu noqdo macallinka mareegaha kuma adka sida kuwa kale. Looma baahna TEFL, waayo -aragnimo baris, ama shahaado midna maaha inaad noqoto af -ingiriisiga hooyo si aad shaqo u hesho. Websaydhku wuxuu si fiican ugu habboon yahay kuwa doonaya inay si caadi ah wax u baraan sida “hustle side” oo ay helaan dakhli dheeraad ah.
Si kastaba ha noqotee, mushaharku sidaa uma fiicna $ 10.20 saacaddii, waxaad wax ku bari kartaa barnaamijka adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah ama shabakadda adoo adeegsanaya laptop -kaaga. Sidoo kale, macallimiinta waxaa la siiyaa mushahar toddobaadle ah.
3. 51 Hadal
Haddii aad rabto inaad barato Ingiriisiga carruurta da'doodu tahay 4-12 oo aad khibrad u leedahay, markaa 51 Talk ayaa ku habboon. Baridda mareegaha wax walba waxay ku saabsan tahay xamaasad ku saabsan waxbaridda carruurta iyo sameynta isku xirnaan gaar ah inta aad sidoo kale kasbato, illaa $ 15 saacaddii oo lagu daray gunno kale.
Macallimiintu waa inay haystaan ​​shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada waxbaridda oo la aqoonsan yahay sida TEFL ama TESOL. Ballan -qaadku waa hal sano waqtiga ugu yar ee wax -bariduna waa 30 saacadood bishii.
Dhagaha Magic waa mid ka mid ah mareegaha wax lagu baro Ingiriisiga ee internetka oo leh madal barashada Ingiriisiga oo casri ah oo loogu talagalay ardayda da'doodu u dhaxayso 4-12. Shirkadda fadhigeedu yahay Shiinuhu waxay bixisaa $ 26 saacaddii waana mid ka mid ah shaqooyinka waxbaridda onlaynka ah ee ugu mushaharka badan oo xitaa uma baahnid shahaadada koowaad ee jaamacadda si aad u dalbato laakiin waa inaad mid raacdaa oo aad noqotaa TESOL ama TEFL la xaqiijiyay.
Waxay kaloo doorbidaan kuwa ku hadla Ingiriisiga hooyo, markaa, haddii aad ka timid Kanada, New Zealand, US, South Africa, Australia, iyo UK waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku booddo degelkan oo aad dakhli ka hesho raaxada gurigaaga.
DaDa ABC waa mid ka mid ah shabakadaha barashada Ingiriisiga ee ugu sarreeya oo fadhigiisu yahay Shiinaha oo shuraako la ah machadyada waxbarashada heerka sare oo ay ku jiraan Jaamacadda Oxford Press iyo Pearson Education. Waxaad u baahan doontaa shahaadada koowaad ee jaamacadda, shahaadada waxbaridda, caddeynta dukumiintiyada waayo-aragnimada waxbaridda, iyo dukumiintiyada taageeraya baaritaanka asalka aan dambi ahayn ka hor intaadan shaqo u helin inaad wax ku barato degelkan.
Fasal kasta waa 30 daqiiqo oo ah waqtiga wax -barashada macallimiintuna waxay dooran karaan wakhti kasta oo ay rabaan inay shaqeeyaan laakiin waa inay la kulmaan ugu yaraan saacadaha shaqada ee 10 saacadood bishii. Macallimiintu waxay kasbadaan $ 25 saacaddii oo ay ku jirto gunnooyin gaaraya ilaa $ 7.
GoGoKid waa degel kale oo Ingiriis ah oo wax lagu baro oo ugu sarreeya laakiin waxaa loogu talagalay oo keliya Kanadiyaanka iyo Ameerikaanka haysta shahaadada Bachelor iyo shahaadada TEFL. Fasalku waa 25 daqiiqo oo waxaad heleysaa inaad kasbato $ 14-25 saacadiiba oo aad barato carruurta Shiinaha ee da'doodu tahay 3-12 sano. Madalku wuxuu abuuri doonaa qorshayaal cashar, calaamadee shaqada guriga, ama la hadal waalidiinta intaad diirada saarto waxbaridda.
Qkids waa mid ka mid ah mareegaha wax lagu baro Ingiriisiga ee tooska ah ee isku xira macallimiinta Ingiriisiga ee Waqooyiga Ameerika malaayiin arday da 'yar oo caalami ah oo da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 12 sano jir. Kaliya macallimiin Mareykan iyo Kanadiyaan ah ayaa ka shaqeeya masraxa waxayna heli karaan inay adeegsadaan madal waxbarasho ku saleysan sheeko ku saleysan si ay ardayda ugu hagaan khibrad manhaj oo xiiso leh oo firfircoon.
Shuruudaha macallinka waxaa ka mid ah shahaadada bachelorka, shahaadada waxbaridda Ingiriisiga, dib u bilaabista, fiidiyaha hordhaca ah ee 1-2minute, iyo shaashadda shaashadda kombiyuutarka.
8. Iftiinka barashada
Learnlight waa madal isku xirta macallimiinta Ingiriisiga iyo dadka waaweyn ee dhaqan ahaan kala duwan ee qaybaha kala duwan. Waxaad ka qaybgeli kartaa kalfadhiyo hal-hal ah, kooxo dalwaddii ah, koorsooyin xirfadeed oo khaas ah, iyo qiimeyn heer. Waxaad u baahan doontaa inaad haysato shahaadada waxbaridda ee luqadda ajnabiga ah, haysato ugu yaraan laba sano oo waayo -aragnimo wax -barashada luqadda ah, aqoonta luuqadda Ingiriisiga, oo aad haysato aaladaha dhijitaalka ah ee lagama maarmaanka u ah inaad fasallada ku qabato internetka.
9. EF Ingiriisiga Koowaad
Ingiriisiga Koowaad waa barxad ay macallimiinta ku hawlan kula kulmaan ardayda onlaynka si ay u baraan Ingiriisiga. Macallin ahaan, waxaad dooran kartaa jadwalkaaga adiga oo adeegsanaya aaladaha dhijitaalka ah, wax ka baro meel kasta oo adduunka ah. Shuruudaha waxbaridda waxaa ka mid ah inaad si buuxda ugu hadashid Ingiriisiga heerka C2, kasbato shahaadada koowaad ee jaamacad kasta, inaad haysato shahaado TEFL, iyo inaad noqoto muwaadin Mareykan ah.
SayABC waa mid ka mid ah shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah oo leh dakhli gaaraya $ 19 fasal kasta fasal kasta ilaa 40 daqiiqo oo waxaad heli kartaa inaad dejiso saacadahaaga. Macallimiinta danaynaya inay codsadaan waa inay noqdaan kuwa ku hadla Ingiriisiga hooyo, ku qalabeysan kombiyuutarro leh xawaare isku xirnaan deg -deg ah, haysta shahaadada koowaad ee jaamacadda ama ka sare, leh ugu yaraan hal sano oo waayo -aragnimo wax -baris ah, oo haysta shahaadada waxbaridda.
Macallimiintu waxay ka shaqeeyaan guriga waxayna baraan carruurta Ingiriisiga ah ee da'doodu u dhaxayso 5 iyo 12.
iTalki waa mid ka mid ah websaydhada waxbaridda ee Ingiriisiga ee kala duwan oo taageera ardayda ka socota Brazil, Russia, iyo Shiinaha, iyada oo ujeedadu tahay in la baro Ingiriisiga. Madalku wuxuu u shaqeeyaa macallimiin ka socda UK, US, iyo Canada. Bogga internetka, waxaad dooran kartaa inaad noqoto macallin luqad oo aan u baahnayn shahaadada TEFL, ama macallin xirfadle ah oo u baahan shahaadada waxbaridda sida TEFL ama TESOL.
Macallin ahaan, waxaad ku dejin kartaa qiimayaasha saacad kasta websaydhka laakiin xaddiga caadiga ah ee macallinku sameeyo saacaddii wuxuu u dhexeeyaa $ 9 iyo $ 13.
Skimatalk waa mid ka mid ah shabakadaha barashada Ingiriisiga ee tooska ah ee u oggolaanaya ardayda inay ku bartaan Ingiriisiga khadka tooska ah meel kasta, mar kasta oo ay haystaan ​​qalabkii loo baahnaa si ay ugu biiraan fasalka. Macallimiinta ku sugan Skimatalk waa kuwa ku hadla Ingiriisiga oo casharrada waxaa loo qabtaa si hal-hal ah. In kasta oo aan loo baahnayn shahaadooyinka waxbaridda iyo waayo -aragnimada laakiin haddii aad haysato, waxay ku siin doonaan tartan tartan ah.
Liiskayagii ugu dambeeyay ee shabakadaha wax lagu baro Ingiriisiga ee tooska ah waa Palfish, codsi loogu talagalay macruufka iyo Android halkaas oo macallimiinta lacag lagu siiyo si ay ula sheekaystaan ​​ardayda taleefankooda ama kiniinkooda. On Palfish, waxaa jira saddex nooc oo macallimiin ah;
Macallimiinta Palfish -ka ee bara “hadalka xorta ah”, taas oo ah, toos u soco si ay u sii qulqulaan una abuuraan nuxurkooda
Macallimiinta koorsada rasmiga ah ee Palfish waxay dejiyaan manhaj waxayna leeyihiin shuruudo shaqaalayn oo adag.
Macallimiinta koorsada Palfish Philippines - waxay u furan yihiin macallimiinta Ingiriisiga Filibiin.
Macallimiintu waxay dejin karaan qiimayaal u gaar ah, waa inay haystaan ​​shahaadada waxbaridda, oo noqdaan kuwa ku hadla Ingiriisiga laakiin koorsada Palfish Philippines waxay shaqaaleysiiyaan macallimiin Ingiriis ah oo ka socda Filibiin.
Kuwani waa websaydhada waxbaridda ee Ingiriisiga ee ugu wanaagsan, aaladahaani waxay bixiyaan hab abaalmarin leh oo dhib badan si loo helo dakhli asaasi ah ama lagu kabo shaqo waqti-buuxa ah.
Lacag ma ka heli karaa mareegaha barashada Ingiriisiga ee onlaynka ah?
Haa, waad awoodaa Markaad iska diiwaangeliso websaydka macallin ahaan oo aad shaqaysato, waxaa lagugu siin doonaa lacag bixinta bixinta adeegyadaada waxbaridda.
Sideen ugu baran karaa Ingiriisiga onlayn?
Si aad Ingiriisiga wax ugu barato internetka, buuxi dhammaan shuruudaha sida kor looga hadlay, ka dooro liistada mareegaha waxbaridda Ingiriisiga ee tooska ah ee ugu wanaagsan oo isu qor macallin ahaan.
Barida qadka ma u qalantaa?
Markaad wax ku barato internetka, waxaad lacag ka heli doontaa raaxada gurigaaga oo aad la kulmi doontaa ardayda ka soo jeeda dhaqamada kala duwan.
17 CPD-da Bilaashka ah ee Macallimiinta
baraha internetka ee barashada Ingiriisiga
Previous Post:10 Dugsiyada Caalamiga ah ee ugu Fiican Switzerland
Post Next:15 Siyaabood Oo Luqadda Ingiriisiga Loogu Barro Ardayda Shiinaha Si Faa'iido Leh